အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Nov 20, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, November 20, 2010 Saturday, November 20, 2010 Labels: အလှအပရေးရာ
ဆောင်းရာသီ ရောက်လာပြီဆိုတော့ အအေးဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ရယ်၊ ဖက်ရှင်ကျကျ လှလှပပလေး လမ်းထွက်နိုင်ဖို့ရယ် ၊ ပွဲလမ်းသဘင်ကို စတိုင်ကျကျလေး တက်နိုင်ဖို့ရယ်အတွက် လည်စည်းလှလှလေးတွေနဲ့ အသုံးပြုကြပါစို့လားနော်… ကျွန်မနေတဲ့ မြို့ကလေးမှာလည်း မနက်ခင်းနှင်းတွေဝေပြီး အေးလာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လည်စည်းလေးတွေက အအေးဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အဖော်မွန်လေးအဖြစ် အသုံးဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မက လည်စည်းစကာဖ့် ကလေးတွေကို နှစ်သက်စွာ စုဆောင်းတတ်သူမို့ ဆောင်းရာသီမှာ ကိုယ်စုဆောင်းထားတဲ့ ပုဝါလေးတွေကို အသုံးချခွင့်ရတော့ နှင်းလေးတွေ ဝေနေတဲ့ ဆောင်းရာသီကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်..
အေးတဲ့ရာသီနဲ့ အေးတဲ့အရပ်ဒေသ အတွက်တော့လည်စည်းက မရှိမဖြစ်လို့ ဆိုရလောက်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းတို့လို ပူနွေးတဲ့အရပ်ဒေသမှာလည်း လည်စည်းပုဝါ အပါးလေးတွေနဲ့ စတိုင်ထုတ်လို့ရပါတယ်.. နွေရာသီလို ဥတုမျိုးအတွက်လည်း ပါးလျသော အရောင်လှလှ လည်စည်းပုဝါလေးတွေ များစွာ ရှိပါတယ်.. လည်စည်းဆိုတာမျိုးကလဲ ပျိုပျိုအိုအို အသက်အရွယ်မရွေး ဘယ်သူနဲ့မဆို လိုက်ဖက်သင့်တော်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်.... ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်မဲ့လည်စည်းလေး ရွေးချယ်ရတာကိုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်. သာမာန်ရိုးရှင်းပြီး သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ ၀တ်စုံလေးတစ်စုံပေါ်မှာ လည်စည်းအရောင်လှလှလေး ဆင်မြန်းလိုက်တဲ့အခါ လည်စည်းပုဝါလေးရဲ့ အရောင်နဲ့ လှပစွာ စည်းနှောင်ထားတဲ့ အလှကြောင့် သင်ဟာ ထူးထူးခြားခြား ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေမှာကို မယုံမရှိပါနဲ့နော်။ အောက်မှာ လည်စည်းစည်းနည်းအချို့ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါမယ်.. နှစ်သက်ရာ စည်းနည်းနဲ့ လှပစွာ စည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်...
(၇) ဒီနည်းကတော့ အင်္ကျီကုန်သက်သာမယ်.. ဒါပေမဲ့ မလုပ်နဲ့နော် :)
လည်စည်းကို နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့ နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုက လည်စည်းလေး ၀တ်ထားရင် ဘယ်လို လည်ဆွဲအဆင်တန်ဆာမှ ၀တ်ဆင်စရာ မလိုတော့တဲ့အတွက် ဆွဲကြိုးအဆင်တန်ဆာ ရွေးချယ်ရ သက်သာစေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်စားတာလည်း သက်သာနိုင်ပါသေးတယ်.. ဒီတော့ သင့်မှာ လည်စည်းလုပ်ဖို့ စကာဖ့် ပုဝါတွေ အရောင်စုံသာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အခြား ဖန်စီ ဆွဲကြိုးတို့၊ တန်ဖိုးကြီးလည်ဆွဲတို့ ၀ယ်ဖို့ မလိုတော့တဲ့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေတဲ့အပြင် လည်စည်းစည်းတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စတိုင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်အသားလေးအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော မမတွေက လည်စည်းလေးတွေ အမြဲစည်းတတ်ကြတယ်လေ.. အဲဒါဆို သူများတကာထက် ထူးခြားနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အမှတ်အသားနဲ့ ကိုယ်ပိုင် စတိုင်လေးတွေဘဲပေါ့။ ဖက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူများလုပ်လို့ နောက်ကနေ လိုက်လုပ်တဲ့ဖက်ရှင်ထက် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးနဲ့ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဖက်ရှင်ကို ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးထဲကအတိုင်း ဆင်မြန်းတာက ပိုပြီး တင့်တယ်လှပစေပါတယ်..
(၉) စကာဖ့်ကို ခေါင်းစည်းနည်း
(၁၀) ဒါက တစ်နည်း
(၁၁) ဒါလည်း တစ်မျိုး
(၁၂)လည်ပင်းပေါက်ကျယ်လွန်းပြီး ပုဝါစည်းတာ သေးလွန်းတယ်
(၁၃)အရောင်ဖျော့နဲ့ အရောင်လွင်လွင်လေး တွဲဖက်ထားတာ တော်တော် လှပါတယ
(၁၄) ဒီနည်းက ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းပြန်စွပ်နေသလိုဘဲ.. ကြိုက်ဖူး.. လည်ပင်းအစ်တယ်
(၁၅) ဒါတော့လှတယ်.. လူလဲလှလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်
လည်စည်းပုဝါလေးတွေဟာ ဈေးလည်း မများလှဘဲ စည်းထားသူကို စတိုင်ကျကျ အဆင့်မြင့်မြင့် လှပစေတဲ့ ထောက်ကူပစ္စည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်လို့များ မိမိဝတ်ထားတဲ့အင်္ကျီကို အရမ်းရိုးလွန်းတဲ့ပုံ ပေါက်နေတယ်လို့ စိတ်ထဲကခံစားမိရင် လည်စည်းလှလှလေး တစ်ခုသာ ရွေးပြီးဆင်ယင်လိုက်ပါ.. စတိုင်ကျကျလေး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေမှာလဲ ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့အင်္ကျီဟာ လည်ပင်းပေါက်ကလေးများ သိပ်ကျယ်နေခဲ့ရင်လည်း.. လည်စည်းလေးကို အသုံးချလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လူတွေအကြား သွားလာဖို့ အဆင်ပြေနိုင် စေပါတယ်.. လည်ပင်းပြောင်ပြောင် ရှင်းရှင်းနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ကျီတို့က လည်စည်းနဲ့အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်.. အတွန့်အဖတ်အလွန်များတဲ့ အင်္ကျီမျိုးကို လည်စည်းနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဖက်ရှင်မကျတဲ့အပြင် အမြင်အာရုံ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အိတ်မှာ ခုလိုချည်နှောင်ပြီး စတိုင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း လှပါတယ်..
မိမိဝတ်ဆင်မဲ့အင်္ကျီဟာ အပွင့်အခက်များတဲ့ အဆင်သော်လည်းကောင်း၊ အစင်းအကြားများပါတဲ့ အဆင်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လည်စည်းဗြောင်ကလေးနဲ့သာ တွဲဖက်သင့်ပါတယ်.. ၀တ်ဆင်မဲ့ ၀တ်စုံဟာ အရောင်မထွက်ဘဲ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ သင့်စိတ်ထဲ ထင်နေခဲ့ရင် အရောင်ခပ်တောက်တောက် လည်စည်းပုဝါလေးကို အသုံးပြုပြီး လူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံကို ဆွဲဆောင်စေနိုင်ပါတယ်.. အပွင့်အခက် အတွန့်အတက်မပါတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအင်္ကျီမျိုးကတော့ ဘယ်လိုလည်စည်းနဲ့မဆို လိုက်ဖက်ပါတယ်.... အချို့ကတော့ ၀တ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင် အနုအရင့်လေးတွေကို ရွေးချယ် ဆင်မြန်းတတ်ကြပါတယ်.. ခရီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း လည်စည်းပုဝါ တွေဟာ ခေါင်းစည်းအဖြစ် အသုံးချပြီး နေပူဒဏ်နဲ့ ဖုန်ထူထူဒဏ်ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်... အသက်ငယ်ငယ် မိန်းမပျိုလေးများအတွက် ဘောင်းဘီမှာ ခါးပတ်အနေနဲ့ လည်စည်းပုဝါတွေကို စည်းနှောင်ပြီး ဖက်ရှင်ထွင်လို့လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါသေးတယ်..
ဒါတော့ တစ်မျိုး(အရပ်ရှည်ရှည် စတိုင်ဘောင်းဘီနဲ့ဆို ဒီနည်းအတိုင်းချည်)
ဒါကတော့ အပေါ်ကနေ ပတ်ချင်သူတွေအတွက်
လည်စည်းကို ပိတ်ချည်သား အရောင်စုံအဆင် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ၀တ်ဆင်ကြသလို.. သိုးမွေး၊ ယုန်မွေးလို ချည်မျိုးနဲ့လဲ စိတ်ကြိုက်ပုံစံထိုးပြီး ၀တ်ဆင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်... အသက်ငယ်ရွယ်သူများကတော့ အရောင်ဆန်းဆန်း၊ ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လို့သင့်တော်ပေမဲ့ အသက်ရလာတဲ့ အန်တီတို့ ဘွားဘွားတို့အရွယ် ( ကျွန်မတို့လိုအရွယ် :) ) တွေကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်မဲ့ အဆင်လေးတွေနဲ့ လူကြီးဆန်တဲ့ အရောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေကို ဆင်ယင်သင့်ပါတယ်.. ကျွန်မ တို့ဆီမှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက လည်စည်း၊ ခေါင်းစည်းဖက်ရှင်တွေ ခေတ်စားခဲ့ဖူးပါတယ်.. ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး အန်တီဒေါ်ခင်ယုမေဆိုရင် လည်စည်းလေးတွေနဲ့ စတိုင်ကျကျလေး အမြဲတမ်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်.. ဖက်ရှင်ဆိုတာ ခေတ်ကုန်ပြီရယ်လို့မရှိဘဲ အမြဲတမ်း တစ်ပတ်ပြန်လည် လာတတ်တာမို့ မိမိနှစ်သက်တဲ့စတိုင်ကို လိုက်ဖက်အဆင်ပြေစွာ၊ စိတ်ကူးပုံဖော်ရင်း ရာသီချိန်ခါမရွေး လှလှပပလေး ရွေးချယ် ၀တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်..
ဟောလီဝုဒ်စတား ကေသီဟုမ်းရဲ့ လည်စည်းဖက်ရှင်
ပဲရစ်စ်ကတော့ ခေါင်းစည်းစကာဖ့်ကို ပိုကြိုက်ပုံရပါတယ်.
အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီရဲ့ လည်စည်း
ဂျနီဖာ လိုပက်ဇ်ကတော့ ၀တ်စုံနဲ့ ၀မ်းဆက် ပုဝါတွေကို နှစ်သက်စွာ ၀တ်ဆင်တတ်သူပါ။
လည်စည်းဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေသာ စည်းသင့်တယ်လို့ ထင်ရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်.. အမျိုးသားများဟာလည်း ဖက်ရှင်ကျဖို့အတွက်နဲ့ အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လည်စည်းကို စည်းကြတယ်.. ပူအိုက်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာတော့ စတိုင်ထုတ်ချင်ဇောနဲ့ လည်စည်းအထူကြီးတွေ ပတ်ပြီး မသွားမိဖို့တော့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်.. စတိုင်မကျဘဲ လူတွေပြုံးစရာ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါနော်… အောက်မှာ လည်စည်းနဲ့ စတိုင်ကျန ခန့်ထည်နေတဲ့ အမျိုးသားအချို့ရဲ့ ပုံတွေကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ဘောလုံးစတား ဘက်ခမ်းတော့ ပြောစရာမရှိ.. မိုက်မှမိုက်
အရမ်းအေးရင်တော့ ဒီလိုလေး ၀တ်
ပဲလေးနဲ့ ဒီလိုလေးလည်း စည်းလို့ရသေး
စွပ်ကျယ်နဲ့ လည်စည်းနဲ့ ( ဟိဟိ ဒါလည်း စတိုင်တစ်မျိုးပေါ့လေ)
တစ်ချို့သော သူငယ်ချင်းတွေက အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ မပါဘူး မျက်နှာလိုက်တယ် ပြောလာမှာစိုးလို့ မဖြစ်မနေ ထည့်ပေးရပါတယ်..... :) :)
လူတိုင်း စတိုင်ကျကျနဲ့ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေစွာ လှပဆင်ယင်နိုင်ကြပါစေရှင်…